गेस्ट हाउसको बन्द कोठामा चार महिलासित के गर्दै थिए एक्ला पुरुष ? खुल्यो यस्तो रहस्य — Sanchar Kendra
गेस्ट हाउसको बन्द कोठामा चार महिलासित के गर्दै थिए एक्ला पुरुष ? खुल्यो यस्तो रहस्य
काठमाडौँ । भक्तपुरको सुर्यबिनायक नगरपालिका–८ आदर्श स्थित एक गेस्ट हाउसबाट प्रहरीले चार महिला र एकजना पुरुषलाई आपत्तिजनक अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । पार्वती भन्ने गोमा गोतामेले संचालन गरेको कस्तुरी चमेना गृह गेस्ट हाउसको कोठामा प्रहरीले छापा मारी अनैतिक कृयाकलाप गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीले गेस्ट हाउस सञ्चालक नुवाकोटको तादी गाउँपालिका–२ घर भई हाल कोटेश्वर बस्ने वर्ष ४५कि पार्वती भन्ने गोमा गोतामेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका उपर जिल्ला अदालत भक्तपुरमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धको कसूर अन्तर्गत म्याद थप भई अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । एउटाकी पत्नी अर्काकी प्रेमिका, काठमाडौंमा मध्यराति यसरी चल्छ अफेयर
निर्मला (नाम परिवर्तन)का पति अमेरिकामा थिए । काठमाडौंमा उनको प्रेमी थिए, बिक्रम शर्मा (नाम परिवर्तन) । शर्मासँग उनी लामो समय डेटिङमा रहिन् । कहिले ककनी, कहिले धुलिखेलमा यो जोडीले प्रेम अनुरागमा समय बितायो । घरि–घरि शारिरीक सम्बन्ध पनि जोडियो । निर्मला अमेरिका पुगिन् बिक्रम काठमाडौंमै आफ्नो पेशा व्यावसायमा व्यस्त छन् । उनीहरूको अहिलेको सम्बन्ध अपरिचित जस्तै छ ।